कोरोना न ‘प्रोपोगण्डा’ न ‘बोसिय तत्व’ यो त यमराजको रुप हो – Nepal Japan
नेपाली समय : 07:11:31
जापानी समय : 10:26:31
15 October, 2020 14:00 | बिचार | comments | 49050 Views
विश्वका अन्य देशका कुरा छाडौं, आफ्नै देश, आफ्नै छरछिमेक र आफन्तहरु कोरोनाबाट ग्रस्त हुन थालेपछि हरकोहीको मस्तिष्कमा अहिले एउटा नयाँ कुराले जन्म लिएको हुनुपर्छ– “कोरोना केही हैन, बेसार पानी खाएर यो भाग्छ”को साटो “कोरोना मृत्युको कारण हो, यसलाई खेलाँची ठान्नु हुँदैन ।” तर कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएकाहरुले यसलाई विजयको संज्ञा दिए । के संक्रमितहरुले कोरोनासंग प्रतिस्पर्धा गरेको हो र विजयी भएको । अभिनेता तथा नेपाल वायुसेवा निगमका वरिष्ठ विमान चालक (क्याप्टेन) विजय लामा २७ दिनको उपचारपछि आफ्नो ब्लगमा भिडियो शेयर गर्दै भने– “कोरोना ख्यालख्याल हैन, यहाँ अति लापरवाही छ, यसले संक्रमित गरेपछि बच्न मुस्किल छ । तसर्थ कोरोनामाथि विजयी पाएको हैन यसबाट बचेर आएको” भन्दै सर्वसाधारण, सरकार, सबैलाई सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो ।
नेपालमा गत माघमा नेपालमा चीनबाट आएका एक व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि झण्डै दुई महिना त्यस्तो अर्को संक्रमित भेटिएन, तर चैत्रमा फ्रान्स हुँदै नेपाल आएकी एक युवतीमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टिपछि विस्तारै यसले आफ्नो पञ्जा फिंजाउँदै गयो र अहिले झण्डै सवा लाख मानिस संक्रमित भैसकेका छन् । दोस्रो संक्रमित भेटिएपछि ‘लकडाउन’ गरियो, सीमा बन्द गरियो तर मानिसहरु यसरी भित्रिए कि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने, सुरक्षा उपाय अपनाउने काम सब देखावटी मात्रै भयो । अन्ततः ७ महिनाको बीचमा सवा लाख संक्रमित पुगे । अहिले राजधानी काठमाडौं उपत्यका अति जोखिममा छ । दशैं, तिहार, छठ जस्ता पर्वहरु नजिकै आइसकेको छ, यस अवधिमा केही प्रभावकारी कदम चालिएन भने, जनताा स्वयं सचेत भएनन् भने त्यसपछिको अवस्था कल्पना गर्न नसकिने हुनेछ ।
सुरुका दिनमा केही दर्जन मानिस संक्रमित हुँदा, कसैको मृत्यु नहुँदा नेपालमा कोरोनालाई ख्यालख्याल ठानियो, लहैलहैमा लागियो अनि अनेक तर्क–कुतर्क गरेर आम जनतालाई भ्रमित पार्ने, उत्तेजित पार्ने, त्रस्त पार्ने सबै हर्कत भए । कोरोना जसलाई भएको छ र जो कारोना संक्रमणबाट बाँचेर आएको छ उनीहरुको भनाईको तुलनामा कोरोना केही हैन भन्दै फैलाइएका प्रोपोगण्डाले बढी प्राथमिकता पाए । यसले गर्दा मुलुकमा संक्रमणको गति तीब्र भयो । साढे ६ सयभन्दा बढीको मृत्यु, ३५ हजारभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित नेपालमा छन् ।
कोरोनाका बारेमा जसरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भ्रम फिंजाए वेवास्ता गरे, उनी आफैं झण्डै सक्किएका । ब्राजिलका राष्ट्रपतिले कोरोना प्रोपोगण्डा मात्र हो भनेर वेवास्ता गरे ब्राजिल विश्वमै तेस्रो सबभन्दा प्रभावित मुलुक बन्यो । केही हप्ता यता मात्र उसलाई भारतले जितेको हो । भारतले सुरुदेखि नै सचेतना अपनाउँदा अपनाउँदै जब सार्वजनिक यातायात र आवतजावत खुला गर्याे, तब त्यो मुलुक विश्वको दोस्रो ठूलो प्रभावित मुलुक बन्यो ।
नेपालमा पछिल्लो समय निषेधाज्ञा खुला गरिएपछि यता कसरी संक्रमित बढिरहेका छन् ? मृत्युदर कति बढेको छ र सक्रिय संक्रमितको संख्या कसरी थपिदै गएको छ भन्ने सामान्य मूल्यांकन व्यक्ति स्वयंले गरेर शतर्क हुनुको विकल्प छैन । जसलाई संक्रमण भएर कुनै लक्षण देखिएन उनीहरु भाग्यमानी हुन्, तर जो संक्रमित भएर बिरामी भए, उनीहरुलाई सोध्नुपर्छ यसले असर गर्न थालेपछि बाँचेर फर्कन कति गाह्रो हुन्छ भन्ने ।
कोरोना न मानव सिर्जित भाइरस हो न हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो ‘बोसीय तत्व’ नै हो । यो महामारी नै हो । विज्ञहरुले, विश्लेषकहरुले, जानकारहरुले राजनीतिक उचाई पाउन यसका बारेमा जेजति कुरा फलाके पनि सर्वसाधारणलाई यसबाट बच्ने कुरा सिकाउनुको साटो कोरोना षड्यन्त्र हो, यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको व्यापारको मेसो हो भनेर जनसाधारणलाई यसप्रति खेलाँची गर्न प्रेरित गर्ने अभिव्यक्तिहरु अब बन्द हुनुपर्छ ।
षड्यन्त्रै भए पनि यो महामारी हो, महामारीबाट बच्नैपर्छ । यसबाट संक्रमित भएर बिरामी पर्न थालेपछि मानिसको जीवन रक्षा गर्न कति कठिन हुन्छ । ४०–४५ दिन भेन्टिलेटरमा बसेर घर फर्कन पाएकाहरुको व्यथा सुन्नुपर्छ सबैले । कोरोनाकै कारण ४५ दिन राजधानीको महंगो अस्पतालमा बिताएर फर्केका मानिसहरुले कोरोनाका बारेमा के भन्छन् ? उनीहरुले बेसार पानी खाएर ठीक भयो भन्छन् कि अरु नै केही ? कोरोनाका बारेमा भ्रम पालेर निर्धक्क हुनु भनेको आफू, आफ्नो परिवार र समाजलाई सिध्याउनु हो ।
जनतालाई कोरोनाबाट त्रस्त पनि बनाउनु हुँदैन र भ्रमित पनि गर्नु हुँदैन । बोसीय तत्व हो भनेर “तातोपानी खाएर यो पगाल्नुपर्छ” देखि “बेसार पानीले कोरोना ठीक हुन्छ” भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीकै तीनजना सल्लाहकार र स्वकीय सचिव कसरी संक्रमित भए ? उहाँकै सरकारी निवासको सुरक्षामा खटिएका ६३ जना सुरक्षाकर्मी कसरी संक्रमित भए ? उनीहरुले बेसार पानी र तातोपानी खाएका थिएनन् ? कोरोनाका सवालमा ठट्यौली बन्द हुनुपर्छ ।
अब आम जनताप्रति राज्यले दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकार मात्र चलाउने मेसोमा जनताको जीवन जोखिममा पार्नु हुँदैन । अझै समय बितिसकेको छैन, सरकारले कोरोना रोकथामका लागि नयाँ ढंगले योजना बनाउनैपर्छ । देशमा आइसोलेसन बेड खाली हुँदैछन् भने आइसीयू र भेन्टिलेटर भरिभराउ ! यसको संकेत के हो भने सक्रिय संक्रमित बढिरहेका छन् र मृत्युदर बढिरहेको छ ।
काठमाडौंकै कुरा गर्ने हो भने कोरोनाले लक्षण देखाउने अवधि समेत बदलिएको देखिन्छ केही घटना हेर्दा । ज्वरो आएको तीन दिनमा अस्पताल पुर्याएका बिरामी भोलिपल्ट निधन भयो, उनमा कोरोना संक्रमण देखियो । यस्ता प्रतिनिधिमूलक घटना अनगिन्ती छन् । बलियो मान्छेलाई कोरोना लाग्दैन भन्ने भ्रम अझै छ । जब यो भाइरस शरीरभित्र छिर्छ यसलाई तत्काल बाहिर निकाल्न सकिएन भने यसले मृत्युको मुखमा पुर्याउँछ पुर्याउँछ, बलियो होस् वा निर्धो । कोरोना कति भयावह छ भन्ने दृष्टान्त तनहुँको एकैघरका तीनजना मृत्युको सन्दर्भले पनि प्रष्ट हुन्छ ।
गलतको विरोध र सत्यको समर्थन गर्न संकोच मान्नुपर्दैन